किन चाहियो राष्ट्रपतिलाई नयाँ गाडी ? शीतल निवासका गाडी चालु हालतकै « Onlinetvnepal.com
किन चाहियो राष्ट्रपतिलाई नयाँ गाडी ? शीतल निवासका गाडी चालु हालतकै
Published : 25 November, 2018 7:18 am
On : पत्रपत्रिका, राजनीति
सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ‘अनौपचारिक’ सवारीका लागि टोयोटाको गाडी खरिद गर्न प्रतीतपत्र खोलेको छ।
महँगो लिमोजिनका सट्टा तीन वटा हाइल्यान्डर किन्न लागिएको हो। त्यसमा एक बुलेटप्रुफ, अर्का दुई वटा बुलेटप्रुफ जस्तेै देखिने ‘फुलअप्सन’का विलासी गाडी हुनेछन्।
गाडी खरिदलाई लिएर चर्को विरोध भइरहँदा पनि सरकारले थाइल्यान्डको ओरा इन्टरट्रेड कम्पनी लिमिटेडमार्फत गाडी ल्याउने तयारी गरेको छ। नेपालमा टोयोटा गाडी बिक्री गर्दै आएको वैद्य अर्गनाइजेसनले यसमा सहजीकरण गरेको छ । यसको ओरासँग सीधा सम्बन्ध छ। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा चन्द्रशेखर अधिकारीले लेखेका छन्।
विशेष परिस्थितिमा मात्र रकमान्तरमार्फत बजेट उपलब्ध गराउने प्रचलन भए पनि राष्ट्रपतिलाई गाडी खरिदका लागि १४ करोड ३२ लाखको प्रतीतपत्र खोल्ने बुधबार स्वीकृत दिइएको हो। नियमित बजेट चार करोडबाट राष्ट्रपतिको सुरक्षाका लागि पछुवा गाडी, बस र एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रिया यसअघि नै अघि बढिसकेको छ।
औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा राष्ट्रपति भण्डारी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शासनको अन्त्यतिर खरिद गरिएको ‘जगुआर–लिमोजिन’ चढछिन्। सेनाको कार्यक्रममा टुडिखेल आउँदा, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न जाँदा, भोटो जात्रा, हनुमान ढोकालगायत मुस्किलले ६–७ वटा औपचारिक कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले यो गाडी चढछिन् ।
तत्कालीन राजाले निकै लामो उक्त लिमोजिन खरिद गर्न लागेका बेला पनि चर्को विरोध भएको थियो । अन्य औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदा उनी छोटो मर्सिडिज लिमोजिन चढछिन् । जुन विदेशी पाहुना आउँदासमेत त्यही प्रकारको मर्सिडिज चढाउने गरिन्छ।
भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले नेपालमा सोही गाडी चढेका थिए । श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाको स्वागतका लागि सोही गाडी पठाइएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा यस्तै गाडी लिएर आउने गर्छन् । धुलिखेल, पनौती, नागढुंगासम्म पुग्नुपर्दा ल्यान्ड क्रुजर गाडी पनि छ । लामो रुटमा राष्ट्रपति जाँदा सेनाले हेलिकोप्टरमा लैजाने गरेको छ।
रामवरण यादवकै पालामा सरकारले ती ल्यान्ड क्रुजर खरिद गरेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयका लागि सेन्ट्रो गाडीहरू पनि खरिद भएका छन् ।
‘चालु हालतमा तीन फरक फरक सेटका गाडी राष्ट्रपति कार्यालयमा छन । नयाँको कुरा आएको थिएन । अनौपचारिक रूपमा आवश्यक गाडी सरकारले कहिलेकाहीँ गृहका गाडीबाट पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ’, पूर्वराष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीयसचिव रहेका ललित बस्नेतले भने, ‘राष्ट्रपति कार्यालयमा गाडीको धेरै उपयोग हुँदैन । बाहिर जाँदा हेलिकोप्टर प्रयोग हुन्छ । बिग्रनु समान्य हो । कम्पनीले बाहिरबाट सामान ल्याएर ढिक्का नै फेर्ने गर्छ । हामीले चढ्नेजस्तो कारखानामा लागेर यताउता गरिरहने खालका गाडी त्यहाँ छैन।’